Q&A manodidina ny COVID-19 amin'ny fiteny afrikana isam-paritra - AfricaArXiv
navoakan'ny Ny ekipan'ny AfricaArXiv on March 25 March 2020 March 25 March 2020
Ny fanafoanana ny fampahalalana momba ny fomba fanao tsara sy soso-kevitra momba ny fitondran-tena mba hampihenana ny fihanaky ny coronavirus dia omena amin'ny teny anglisy. Fiteny eo an-toerana eo ho eo any 2000 no ampiasaina eto Afrika ary ny olona dia manan-jo hampandrenesina amin'ny fitenin'izy ireo ny zava-misy sy ny fomba hiarovana ny tenany, ny fianakaviany, ny namany ary ny mpiara-miasa aminy.
Nahita ve ianao fa afaka manova ny fitenin'ny tranokalanay? Amin'izao fotoana izao dia manolotra ny votoatinay amin'ny fiteny manaraka:
Aza hadino fa: Ny tranokala AfricaArXiv dia adika otomatis GTranslate.io amin'ny alàlan'ny plugin wp avy amin'ny teny anglisy amin'ny fiteny 19. Tsara ny fandikana nefa tsy tonga lafatra. Afaka manampy anay ve ianao? hanatsara ny lahatsoratra nadika ao amin'ny tranokalanay? Miangavy mailaka mankany fandraisana anjara@africarxiv.org. | tondrozotra: github.com/AfricArxiv/.../translations.md
Mamaky misimisy kokoa momba ny fahasamihafan'ny fiteny amin'ny serasera manam-pahaizana afrikanina amin'ny africarxiv.org/languages/.
Azafady azafady jerena eto ambany ny fampahalalana nomen'ny Birao isam-paritra ho an'ny Afrika // niditra tamin'ny 25 martsa 2020:
WHO Q&A momba ny coronavirus (COVID-19)
Ny firenena Afrikana dia nifindra avy amin'ny fahavononan'ny COVID-19 hamaly raha betsaka ny fanamafisana tranga maro
Nihazakazaka miadana ny fiaraha-monina manerantany ary mampiato ny fihanaky ny COVID-19, pandezana iray izay nahafaty olona an'arivony sy olona an'arivony maro hafa narary. Atsy Afrika, ilay virus dia niparitaka tamina firenena am-polony tao anatin'ny herinandro. Ny governemanta sy ny manampahefana ara-pahasalamana manerana ny kaontinanta dia miezaka ny hametra ny areti-mifindra.
Hatramin'ny nanombohan'ilay fipoahana dia nanohana ny governemanta afrikanina ny fikambanan'i Afrika tamin'ny alàlan'ny fipoahana voalohany tamin'ny alàlan'ny fanolorana ny kitapo fitsapana COVID-19 an'arivony, nanofana mpiasa mpiasa am-polony ary fanamafisana ny fanaraha-maso ireo fokonolona. Firenena efapolo ao amin'ny faritr'i WHO afrikanina no afaka manandrana COVID-19. Tamin'ny fiandohan'ny fivoahana dia roa ihany no afaka nanao izany.
IZA no namoaka fitarihana ho an'ireo firenena, izay havaozina tsy tapaka mba handraisana ny zava-mitranga mivoatra. Ny torolàlana dia misy fepetra toy ny fanalan-jaza, famerenanana ny olom-pirenena ary ny fiomanana any amin'ny toeram-piasana. Ny Organisation dia miara-miasa amin'ny tamba-jotra manam-pahaizana manokana amin'ny fandrindrana ny ezaka fanaraha-maso, ny areti-mifindra, ny modely, ny diagnostika, ny fitsaboana ary ny fitsaboana ary fomba hafa ahafahana mamantatra, mitantana ny aretina ary mametra ny fifindran'ny fampielezana.
IZY dia manome fanampiana lavitra any amin'ireo firenena voakasik'izany amin'ny fampiasana ireo fitaovana data elektronika, ka ny manam-pahefana momba ny fahasalamana nasionaly dia afaka mahatakatra bebe kokoa ny fipoahan'ny firenena any amin'ny fireneny. Ny fiomanana sy ny famaliana amin'ny valan'aretina teo aloha dia manome fototra mafy ho an'ny firenena Afrikanina hialana amin'ny fanaparitahana ny COVID-19.
Ny zava-dehibe dia ny fepetra raikitra amin'ny fisorohana ataon'ireo isam-batan'olona sy vondrom-piarahamonina no mijanona ho fitaovana mahery vaika indrindra hisorohana ny fiparitahan'ny COVID-19. IZA no manampy ny manam-pahefana eo an-toerana hamorona fampitana radio sy onjam-peo amin'ny fahitalavitra mba hampahafantarana ny vahoaka momba ny loza ateraky ny COVID-19 sy ny fepetra tokony horaisina. Manampy ihany koa ny Fikambanana hanoherana ny fanamafisana ary mitarika ireo firenena amin'ny fananganana ivon-toeram-piantsoana mba hahazoana fampahalalana ny vahoaka.
Q&A momba ny coronaviruses (COVID-19)
>> who.int/news-room/qa-detail/qa-coronaviruses // 9 martsa 2020 | Q & A
Ny WHO dia manara-maso hatrany ary mamaly an'ity valanaretina ity. Havaozina ity Q&A ity satria fantatra bebe kokoa momba ny COVID-19, ny fomba fanaparitahana azy ary ny fiantraikany amin'ny olona manerantany. Raha mila fanazavana fanampiny dia avereno jerena tsy tapaka Ny takelaka coronavirus WHO.
Coronaviruses dia fianakaviana lehibe misy viriosy izay mety hiteraka aretina amin'ny biby na olombelona. Ao amin'ny olombelona, ​​maro ny coronaviruses dia fantatra fa miteraka ny aretim-pisefoana miainga amin'ny hatsiaka mahazatra ka aretina lehibe kokoa toy ny Sirioma respiratory Syndrome (MERS) sy ny Syndrome fitempon'ny aretin-tsaina (SARS). Ny coronavirus vao hita farany dia miteraka ny aretina coronavirus COVID-19.
COVID-19 no areti-mifindra vokatry ny coronavirus hita vao haingana. Io virus sy aretina vaovao io dia tsy fantatra raha tsy nanomboka ny fipoahana tany Wuhan, China, tamin'ny Desambra 2019.
Inona avy ireo soritr'aretin'ny COVID-19?
Ny fambara mahazatra an'ny COVID-19 dia ny tazo, havizanana ary kohaka maina. Ny marary sasany dia mety manana fanaintainana sy fanaintainana, fitohanana eo amin'ny orona, orona, marary tenda na mivalana. Matetika ireo soritr'aretina ireo dia malefaka ary manomboka miandalana. Ny olona sasany dia tratry ny aretina fa tsy mitondra soritr'aretina ary tsy mahatsiaro ho salama. Ny ankamaroan'ny olona (manodidina ny 80%) dia sitrana amin'ny aretina nefa tsy mila fitsaboana manokana. Manodidina ny 1 isaky ny olona 6 mahazo COVID-19 no marary mafy ary sarotra ny miaina. Ireo antitra, ary ireo izay manana olana ara-pahasalamana miteraka aretina toy ny fiakaran'ny tosi-dra, ny aretim-po na diabeta, dia mety hiteraka aretina lehibe. Ireo olona voan'ny tazo, kohaka ary sarotra miaina dia tokony hitady fitsaboana.
Ahoana no fomba nielezan'ny COVID-19?
Azon'ny olona atao ny misambotra COVID-19 amin'ny hafa izay manana otrik'aretina. Ny aretina dia mety hiparitaka amin'ny olona tsirairay amin'ny alàlan'ny rano kely avy amin'ny orona na vava izay miparitaka rehefa mihena na mifoka sigara ny olona voan'ny COVID-19. Ireo fonosana ireo dia mihazo ny zavatra sy ny manodidina eny amin'ilay olona. Ny olona sasany avy eo dia misambotra ny COVID-19 amin'ny fikasihana ireo zavatra na marobe, avy eo dia hikasika ny masony, orony na vava. Azon'ny olona atao ihany koa ny misambotra COVID-19 raha miaina anaty rano mitete avy amin'ny olona manana COVID-19 izay mikohaka na manome toromarika. Izany no antony maha-zava-dehibe ny mijanona mihoatra ny 1 metatra (3 tongotra) miala amin'ny olona marary iray.
IZAO no manombatombana fikarohana mitohy amin'ny fomba fielezan'ny COVID-19 ary mbola hizara ny valin'ny fanavaozana hatrany.
Afaka mifindra amin'ny alàlan'ny rivotra ve ny viriosy miteraka COVID-19?
Ny fandinihana hatreto dia milaza fa ny viriosy izay miteraka COVID-19 dia mifindra amin'ny alàlan'ny fifandraisan'ny tadin'ny taovam-pisefoana fa tsy amin'ny rivotra. Jereo ny valiny teo aloha momba ny “Ahoana no fielezan'ny COVID-19?”
Azo alaina ve ny CoVID-19 amin'ny olona tsy misy soritr'aretina?
Ny fomba lehibe manaparitaka ny aretina dia amin'ny alàlan'ny rano mitete avy amin'ny taovam-pisefoana navoakan'ny olona mikohaka. Ny risika hisamborana COVID-19 avy amin'olona tsy misy soritr'aretina mihitsy dia ambany dia ambany. Na izany aza, olona marobe manana COVID-19 no miaina soritr'aretina malemy fotsiny. Marina indrindra izany eo am-piandohan'ny aretina. Azo atao noho izany ny misambotra COVID-19 amin'ireo olona manana kohaka malefaka fotsiny ohatra, ary tsy mahatsiaro marary. Ny WHO dia manombana ny fikarohana mitohy momba ny vanim-potoana fandefasana COVID-19 ary hanohy hizara ireo zavatra hita farany.
Azoko atao ve ny mitsoaka ny COVID-19 avy am-tin'ny olona voan'ny aretina?
Ny loza mety hisambotra COVID-19 amin'ny feces olona voan'ny aretina dia toa ambany. Raha ny fanadihadiana voalohany dia milaza fa ny otrik'aretina dia mety hitranga amin'ny feces amin'ny tranga sasantsasany, ny fiparitahana amin'ity lalana ity dia tsy votoatin'ny fihanahana. IZAO no manombatombana fikarohana mitohy amin'ny fomba fielezan'ny COVID-19 ary hitohy ny fizarana vaovao. Satria mampidi-doza izany, na izany aza dia antony iray hafa dia manadio tanana matetika, aorian'ny fampiasana ny efitrano fandroana sy alohan'ny hisakafo.
Iza no tandindomin-doza mitombo aretina lehibe?
Raha mbola mianatra momba ny fiantraikan'ny COVID-2019 amin'ny olona isika, ny olon-dehibe sy ny olona manana aretina efa nisy (toy ny tosidra, aretim-po, aretin'ny havokavoka, homamiadana na diabeta) dia toa miteraka aretina lehibe kokoa noho ny hafa.
Mahomby amin'ny antibiotika hisorohana na fitsaboana ny COVID-19 ve ny antibiotika?
Tsia. Tsy miasa amin'ny otrikaretina virus ny antibiotika fa miasa amin'ny otrikaretina bakteria ihany izy ireo. COVID-19 dia vokatry ny virus, ka tsy miasa ny antibiotika. Ny antibiotika dia tsy tokony ampiasaina ho fomba fisorohana na fitsaboana amin'ny COVID-19. Tokony hampiasaina amin'ny dokotera fotsiny izy ireo hitsaboana ny aretim-pirazanana.
Mitovy amin'ny SARS ve ny COVID-19?
Tsia. Ny virus izay miteraka COVID-19 sy ilay niteraka ny fihanaky ny "Syndrome" amin'ny taovam-pisefoana mahery vaika (SARS) tamin'ny taona 2003 dia mifamatotra amin'ny fototarazo, fa hafa kosa ny aretina mahatonga azy ireo.
Maty indrindra ny SARS nefa tsy dia misy areti-mifindra noho ny COVID-19. Tsy nisy fipoahana SARS na aiza na aiza eran'izao tontolo izao nanomboka tamin'ny 2003.
Inona no azoko atao mba hiarovako tena sy hisorohana ny fihanaky ny aretina?
Fepetra fiarovana ho an'ny rehetra
Aza hadino ny vaovao farany momba ny fivoahan'ny COVID-19, azo jerena ao amin'ny tranokalan'ny WHO ary amin'ny alàlan'ny manampahefana momba ny fahasalamam-pirenena sy eo an-toerana. Firenena maro maneran-tany no nahita tranga COVID-19 ary maro no nahita fihoaram-pefy. Ny manam-pahefana any Sina sy ny firenena sasany dia nahomby tamin'ny fampihenanana na fampijanonana ny fipoahan'ny firenena. Na izany aza, tsy azo inoana ny toe-java-misy ka mizaha tsy tapaka ny vaovao farany.
Azonao atao ny mampihena ny mety ho voan'ny aretina, na manaparitaka ny COVID-19 amin'ny alàlan'ny fitandremana kely:
Diovy tsy tapaka sy hadio tsara ny tananao amin'ny alàlan'ny tanana manosihosy na manasa azy amin'ny savony sy rano.
Nahoana? Famonoana ny tananao amin'ny savony sy rano na fampiasanao ny famonosana tanana entona mamono otrikaretina izay mety eo amin'ny tananao.
Tazony ny elanelana farafahakeliny 1 metatra (3 tongotra) farafahakeliny eo aminao sy izay rehetra mikohaka na mivonto.
Nahoana? Rehefa misy olona mikohaka na mihetsiketsika dia mamaoka rano kely ao anaty orony na vava izy ireo izay mety misy otrikaretina. Raha akaiky be dia be ianao dia afaka miaina ao anaty tinetezam-bahoaka, tafiditra ao anatin'izany ny virus virus COVID-19 raha voan'ny aretina ilay olona mikohaka.
Aza misoroka maso, orona ary vava.
Nahoana? Mikasika ny faritra marobe ny tanana ary afaka maka otrikaretina izy. Rehefa voadona ny tanana dia afaka mamindra ilay tsimokaretina amin'ny masonao, oronao na vava ny tanana. Avy any, ny valanaretina dia afaka miditra ao amin'ny vatanao ary mety hahatonga anao harary.
Ataovy azo antoka fa ianao sy ireo olona manodidina anao, araho ny fahadiovana mamontsina. Midika izany fa mandrakotra ny vavanao sy ny oronao amin'ny satroka na sela miondrika rehefa mikohaka na mihetsiketsika ianao. Avy eo avereno avy hatrany ny fofona ampiasaina.
Nahoana? Miely virus ny fanafody. Amin'ny fanarahana ny fahadiovam-pisefoana tsara dia miaro ny olona manodidina anao amin'ny otrikaretina toy ny hatsiaka, ny gripa ary ny COVID-19.
Mijanòna any an-trano raha mahatsiaro tsy salama ianao. Raha voan'ny tazo, kohaka ary sarotra ny miaina, mitadiava fitsaboana ary miantso mialoha. Araho ny torolalana an'ny manampahefana momba ny fahasalamana eo an-toerana.
Nahoana? Ny tompon'andraikitra nasionaly sy eo an-toerana no manana fampahalalana farany momba ny toe-javatra misy ao amin'ny faritra misy anao. Ny fiantsoana mialoha dia ahafahan'ny mpanome fitsaboana anao haingana hitarika anao haingana any amin'ny trano ara-pahasalamana mety. Izy io koa dia hiaro anao ary hanampy amin'ny fisorohana ny fihanaky ny otrikaretina sy ny otrikaretina hafa.
Ataovy hatrany ny vaovao farany amin'ny toerana mafana indrindra COVID-19 (tanàna na faritra eo an-toerana izay niparitahan'ny COVID-19). Raha azo atao dia aza soratana amin'ny fitsangatsanganana any amin'ny toerana hafa - indrindra raha olona antitra ianao na voan'ny diabeta, aretim-po na havokavoka.
Nahoana? Manana tombony mety kokoa ianao hisambotra COVID-19 amin'ny iray amin'ireny faritra ireny.
Fomba fiarovana amin'ny olona izay na efa nitsidika tato ho ato (14 andro lasa) izay nielezan'ny COVID-19
Araho ny torolàlana voalaza etsy ambony (fepetra raisina ho an'ny tsirairay)
Mitokantokana amin'ny alàlan'ny fijanonana ao an-trano raha manomboka mahatsiaro ho tsy salama ianao, na dia misy soritr'aretin'ny fahatsapana toy ny aretin'andoha aza, tazo ambany (37.3 C na ambony) ary orona mihosin-kibo mandra-pahasitranao. Raha ilaina aminao ny misy olona mitondra entana ho anao na mivoaka, ohatra, mividy sakafo, dia asio saron-tava mba tsy hihaonan'ny olon-kafa.
Nahoana? Ny fisorohana ny fifandraisana amin'ny hafa sy ny fitsidihana ny tobim-pitsaboana dia hamela ireo fotodrafitrasa ireo hihodina am-pahombiazana kokoa ary hanampy anao hiaro anao sy ny hafa amin'ny mety ho COVID-19 ary ny otrik'aretina hafa.
Raha sendra tazo, kohaka ary misosika fahasosorana, dia mitadiava torohevitra haingana satria mety ho areti-pisefoana na aretina mahery vaika izany. Antso mialoha ary ilazao ny mpamatsy anao ny fitsangatsanganana farany na mifandray amin'ny mpandeha.
Nahoana? Ny fiantsoana mialoha dia ahafahan'ny mpanome fitsaboana anao haingana hitarika anao haingana any amin'ny trano ara-pahasalamana mety. Izany dia hanampy amin'ny fisorohana ny mety ho fihanaky ny COVID-19 sy ny otrikaretina hafa.
Ahoana no mety hahitako ny COVID-19?
Miankina amin'ny toerana misy anao ny risika - ary indrindra indrindra, raha misy valan'aretina COVID-19 miseho eo.
Ho an'ny ankamaroan'ny olona any amin'ny ankamaroan'ny toerana dia ambany ny risika hisambotra COVID-19. Na izany aza, misy toerana ankehitriny eran-tany (tanàna na faritra) miparitaka ilay aretina. Ho an'ny olona monina, na ny fitsidihana, ireo faritra ireo dia mety hampidi-doza kokoa ny fisamborana COVID-19. Ny governemanta sy ny manam-pahefana dia manao hetsika mavitrika isaky ny misy tranga vaovao an'ny COVID-19. Ataovy azo antoka ny fanarahana ny fetra rehetra eo an-toerana amin'ny dia ny fizahan-tany, ny hetsika na ny fihaonana be. Ny fiaraha-miasa amin'ny ezaka fanaraha-maso ny aretina dia hampihena ny mety hisintona na hanaparitaka ny COVID-19.
Ny fipoahan'ny COVID-19 dia azo alaina ary mijanona ny fifindrana, toy ny efa naseho tany Sina sy ny firenena sasany. Mampalahelo fa mipoitra haingana ny fipoahana vaovao. Zava-dehibe ny mahatsapa ny toe-javatra iainanao na mitady handehanana ianao. IZAO no namoaka fanavaozana isan'andro isan'andro momba ny COVID-19 manerantany.
Azonao jerena ireo who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
Maharitra hafiriana ny fotoana fampidirana ny COVID-19?
Ny "vanim-potoana famerenana" dia midika fa ny fotoana ahazoana ny tsimokaretina ary manomboka mahazo soritr'aretina. Ny ankamaroan'ny tombatomban'ny vanim-potoana fananganana ny fampidirana COVID-19 dia ao anatin'ny 1-14 andro, izay matetika indrindra amin'ny dimy andro. Ireo vinavina ireo dia havaozina rehefa misy angon-drakitra misy.
Azoko atao ve ny misambotra ny COVID-19 amin'ny fiarahako?
Raha efa nisy ny alika iray tratra tany Hong Kong, hatramin'izao, tsy misy porofo fa ny alika, saka, na biby fiompy iray dia afaka mamindra ny COVID-19. Ny COVID-19 dia miparitaka amin'ny alàlan'ny vongan-drano novokarina rehefa mihetsiketsika, mangitsoka na miteny ny olona voan'ny aretina. Mba hiarovana ny tenanao, diovy matetika ny tananao matetika.
IZAO no manohy ny fanaraha-maso ny fikarohana farany momba an'io sy ny lohahevitra COVID-19 hafa ary havaozina rehefa misy ny fampitana vaovao.
Milamina ve ny mahazo fonosana avy amin'ny faritra rehetra nitaterana ny COVID-19?
Eny. Ny mety hisian'ny olona voan'ny aretina manimba ny entana ara-barotra ary ambany ny loza mety hitranga amin'ny tsimok'aretina izay mahatonga ny COVID-19 avy ao anaty fonosana iray nafindra, nitsangatsangana ary nidina tamina toe-piainana sy mari-pana samihafa.
Tokony hanahy momba ny COVID-19 ve aho?
Ny aretina vokatry ny tsimokaretina COVID-19 dia malefaka amin'ny ankapobeny, indrindra ho an'ny zaza sy ny tanora. Na izany aza dia mety hiteraka aretina lehibe: eo amin'ny 1 isaky ny olona 5 tratra no mila fikarakarana hopitaly. Ara-dalàna raha tokony hiahiahy ny olona ny amin'ny fiantraikan'ny fivoahan'ny COVID-19 amin'izy ireo sy ny olon-tiany.
Azontsika atao ny mametraka ny ahiahintsika amin'ny hetsika hiarovana ny tenantsika, ireo olon-tiantsika sy ny fiaraha-monina misy antsika. Ny voalohany sy ny voalohany amin'ireo hetsika ireo dia ny fanadiovana matetika sy fanadiovana ny tànana ary ny fahadiovam-pisefoana tsara. Faharoa, ampahafantaro ny toro-hevitra ary araho ny torohevitry ny manampahefana momba ny fahasalamana ao an-toerana, misy ny fameperana napetraka amin'ny fitsangatsanganana, hetsika ary fivoriambe. who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
Misy fanafody na fitsaboana ve afaka manakana na manasitrana COVID-19?
Raha ny fanafody tandrefana, nentim-paharazana na an-trano dia mety manome fiononana sy hanamaivana ny soritr'aretin'ny COVID-19, tsy misy porofo fa ny fisoronana ankehitriny dia afaka manakana na manasitrana an'io aretina io. IZA no tsy manisy fanafody samirery amin'ny fanafody rehetra, ao anatin'izany ny antibiotika, ho fisorohana na fanasitranana amin'ny COVID-19. Na izany aza, misy fitiliana fitsaboana maro mitohy ary ahitana fanafody tandrefana na nentim-paharazana. IZAO no hanohy fampahalalana vaovao raha vao misy ny fikarohana klinika.
Misy vaksiny, fanafody na fitsaboana ho an'ny COVID-19?
Tsy mbola. Hatramin'izao, tsy misy vaksiny ary tsy misy fanafody antivirus voafaritra hanakanana na hitondrana ny COVID-2019. Na izany aza, ny olona voakasik'izany dia tokony handray fikarakarana hanamaivana ny soritr'aretina. Ny olona marary mafy dia tokony hopitaly. Ny ankamaroan'ny marary dia mahazo fisaorana noho ny fikarakarana manohana.
Ny vaksiny mety hitranga sy ny fitsaboana sasany dia anaovana fanadihadiana. Izy ireo dia nosedraina amin'ny alàlan'ny fitsapana klinika. IZA no mandrindra ny ezaka atao hamolavolana vaksiny sy fanafody hisorohana sy hitsaboana COVID-19.
Ny fomba mahomby indrindra hiarovana ny tenanao sy ny hafa amin'ny COVID-19 dia ny manadio matetika ny tananao, manarona ny kohakao amin'ny fomban-doko na tavy, ary mitazona elanelana 1 metatra (3 tongotra) farafahakeliny avy amin'ireo olona mikohaka na sneezing. (Jereo Ny fepetra fiarovana hiadiana amin'ny coronavirus vaovao).
Tokony hanao saron-tava ve aho mba hiarovana ny tenako?
Avereno atao saron-tava ihany raha marary marika COVID-19 (indrindra ny mikohaka) na mitady olona mety manana COVID-19. Ny saron-tava azo ampiasaina dia afaka ampiasaina indray mandeha. Raha tsy marary na mikarakara olona marary ianao dia manamboatra saron-tava ianao. Misy tsy fahampian'ny mason'izao tontolo izao, koa manery ny olona hampiasa saron-tava amim-pahendrena ny olona.
WHO dia manoro hevitra ny fampiasana ny saron-tava fitsaboana ara-pitsaboana mba hisorohana ny fandanindaniam-poana ny loharano sarobidy sy ny fampiasana maska ​​diso (jereo Torohevitra momba ny fampiasana saron-tava).
Ny fomba mahomby indrindra hiarovana ny tenanao sy ny hafa amin'ny COVID-19 dia ny fanadiovana matetika ny tananao, hosory ny kohakao amin'ny fomban-dohan'ny faritra na ny tavy ary mihazona halavira 1 metatra (3 tongotra) farafahakeliny avy amin'ireo olona mikohaka na mihetsiketsika. . jereo ny fepetra fiarovana hiadiana amin'ny coronavirus vaovao Raha mila fanazavana fanampiny.
Ahoana ny fomba hitafy, hampiasana, hanala ary saronana sarontava?
Tadidio fa ny saron-tava dia tsy tokony hampiasain'ireo mpiasan'ny fahasalamana, mpikarakara fitsaboana, ary olona manana soritr'aretin-taovam-pisefoana, toy ny tazo sy kohaka.
Alohan'ny hikasika ny saron-tava, diovy ny tanana amin'ny talenta tanana na savony sy rano amin'ny alikaola
Raiso ny saron-tava ka diniho izy noho ny ranomaso na lavaka.
Iza no ilany eo an-tampony (izay misy ny fantsin-metaly).
Hamarino tsara ny lafiny mety amin'ny saron-tava ho ivelany ivelany (ny lafiny miloko).
Apetaho amin'ny tavanao ny sarontava. Alefaso ny felana metaly na somary miraikitra amin'ny saron-tava ka mahavokatra amin'ny endriky ny oronao.
Esory eo ambany ny saron-tava ka mandrakotra ny vavanao sy ny vavanao.
Aorian'ny fampiasana dia esory ny saron-tava; esory ireo tadivavarana elastika ao ambadiky ny sofina rehefa manafina ny saron-tava amin'ny tavanao sy ny akanjo ianao, mba tsy hikasika ireo valan'ny saron-tava.
Ravao ny saron-tava ao anaty fitoeram-baravarana mihidy avy hatrany aorian'ny fampiasana.
Manaova fanadiovana tànana aorian'ny fikasihana na fandavana ny saron-tava - Ampiasao ny fandroana tanana vita amin'ny alikaola na, raha madio be dia be, sasao amin'ny savony sy ny rano ny tananao.
Mety ho voan'ny aretina avy amin'ny loharanom-biby ve ny olombelona?
Coronaviruses dia fianakaviana lehibe misy viriosy izay fahita amin'ny biby. Indraindray ireo olona dia voan'ny viruses izay mety hiparitaka amin'ny olona hafa. Ohatra, ny SARS-CoV dia nifandray tamin'ny saka civet ary MERS-CoV dia nampita tamin'ny rameva dromedary. Loharanom-biby mety ho an'ny COVID-19 mbola tsy voamarina.
Mba hiarovana ny tenanao, toy ny fitsidihan'ny valam-biby mivantana dia aza atao ny mifandraika amin'ny biby sy ny fatra amin'ny fifandraisana amin'ny biby. Hamarino ny fomba fahasalamana ara-tsakafo tsara amin'ny fotoana rehetra. Ento ny hena, ronono na taova biby mila fitandremana mba tsy handotoana ny sakafo tsy misy voan-kanina ary aza atao ny mandany ny vokatra biby manta na tsy madinidinika.
Mandra-pahoviana ny tsimokaretina velona amin'ny tany?
Tsy fantatra izay hafiriana ny tsimok'aretina mahatonga ny COVID-19 mivelona amin'ny tampony, fa toa mitondra tena toy ny coronaviruses hafa. Ny fandinihana dia nilaza fa ny coronaviruses (ao anatin'izany ny fampahalalana mialoha ny otrikaretina COVID-19) dia mety hitohy amin'ny faran'ny rano mandritra ny ora vitsivitsy na hatramin'ny andro maromaro. Mety hiova izany eo ambanin'ny toe-javatra samihafa (ohatra ny karazany, ny hafanana na ny halalin'ny tontolo).
Raha mieritreritra ny tratry ny aretina ianao dia diovy amin'ny otrikaretina tsotsotra mahafaty ilay viriosy ary miaro ny tenanao sy ny hafa. Diovy ny tananao amin'ny fanosehana tanana amin'ny alikaola na sasao amin'ny savony sy rano. Aza mikasika ny masonao na ny vavanao na ny oronao
Misy zavatra tsy tokony hataoko ve?
Ireto fepetra ireto TSY mahomby amin'ny COVID-2019 ary mety hanimba:
Manao akanjo saron-tava marobe
Maka antibiotika (Jereo ny fanontaniana 10 “Misy fanafody fitsaboana afaka manakana na manasitrana COVID-19 ve?")
Na izany na tsy izany, raha voan'ny tazo, kohaka ary sarotra ny fiterahana mitady fitsaboana ara-pitsaboana aloha hampihena ny loza mety hiteraka aretina mahery vaika ary ho azo antoka ny hizara ny tantaram-pitateranao tato ho ato amin'ny mpitsabo anao.
Mampiasa aho #AI handikana ny "Sasao ny tànanao" amin'ny fiteny mihoatra ny 500. Ity ny fomba nataoko niaraka tamin'ny rohy mankany amin'ireo fandikan-teny: https://t.co/jkXc0ErYOc
Misaotra @facebookai noho ny asany amin'ny MUSE, izay zava-dehibe amin'ny fanatanterahana izany!#NLProc #coronavirus @SILintl pic.twitter.com/3zJrvST3Jc
Sokajy:	Covid-19Fomba fitenyOpen AccessFifandraisana ara-tsiansa